के कारणले दोस्रो प्रकारको मधुमेह (टाइप टु डायविटिज) हुन्छ ? - Hesperian Health Guides
हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि > डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण > मधुमेह (डायविटिज) > के कारणले दोस्रो प्रकारको मधुमेह (टाइप टु डायविटिज) हुन्छ ?
अस्वस्थकर वातावरण पनि सबैजसो दोस्रो प्रकारको मधुमेहको प्रमुख कारण हो । प्रायः मानिसहरु धेरै प्रशोधित खानेकुराहरु खान्छन् र जिवन पद्धतिमा आएको अस्वस्थकर परिवर्तनका कारणले मधुमेह हुन सक्छ । मधुमेहका निम्न कारणहरु छन् ।
आज मिठाई किन्नुभन्दा केरा वा आँप लिनुहोस् ।
१ अस्वस्थकर खानेकुराहरु
२ शारिरिक काम वा व्यायाम नगर्ने वानी
४ पेटको वरपिरिको वोसो
५ मधुमेह भएका परिवारका सदस्यहरु
७ वुढो हुनु
९ रसायनहरुले कसरी मधुमेह गराउँछन्
चिनीयुक्त चिसा पेय पदार्थहरु र प्रशोधित खानेकुराहरु एवं मैदाको धेरै प्रयोगले रगतमा चिनीको मात्रा वढ्न जान्छ र साथै शरिरमा थप वोसो जम्मा पनि हुन जान्छ । प्रशोधित र प्याक गरिएका खानेकुराहरु सजिलैसँग पाइन्छन् । तर यस्ता खानेकुराहरुले मधुमेह र अन्य गम्भिर स्वास्थ्य समस्याहरु निम्त्याउँदछन् ।
तनाव थुप्रिदैं जाँदा यसले स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ ।
शारिरिक काम वा व्यायाम नगर्ने वानी
खेतिपाती गर्ने, हिंडडुल गर्ने, शारिरिक क्रियाकलाप वा खेलमा संलग्न मानिसहरुको रगतमा चिनीको स्तर सामान्य रहन्छ । तर दिनभरको धेरैजसो समय निष्क्रिय रुपमा रहने मानिसहरुले प्रशस्त चिनीलाई पचाउन सक्दैनन्, त्यसकारण यो तिनीहरुको रगतमै जम्मा हुन्छ ।
तनावले गर्दा पनि शरीरमा चिनीको मात्रा बृद्धि हुन्छ ।
पेटको वरपिरिको वोसो
मोटो कम्मर भएका मानिसहरुलाई मधुमेह वढी हुने सम्भावना हुन्छ ।
मधुमेह भएका परिवारका सदस्यहरु
मधुमेह वंशाणुगत पनि हुन्छ र मधुमेहयुक्त परिवारका सदस्यहरु भएका मानिसहरुमा मधुमेह हुने सम्भावना वढी हुन्छ ।
महिलालाई कुपोषण भयो भने उनको पेटको शिशुलाई पछि गएर चिनीको रोगको समस्या हुन सक्दछ ।
उमेर वढ्दै गएपछि खानपिन र जिवनशैलीमा परिवर्तन नगर्ने मानिसहरुमा मधुमेह हुने सम्भावना वढी हुन्छ ।
केही रसायनहरुले हाम्रो शरिरले चिनीलाई प्रयोग गर्ने कुरालाई प्रभाव पार्दछ । काम गर्ने ठाउँ, सडक र ईट्टा भट्टामा हुने प्रदुषणको कारणले हामीले प्रयोग गर्ने खानेकुराहरुमा वा अन्य उत्पादनहरुमा मिसाइएको रसायनले उक्त बस्तु प्रयोग गरेपछि त्यस्ता तत्व शरिरभित्र जान्छन् र मधुमेह हुन सक्छ ।
रसायनहरुले कसरी मधुमेह गराउँछन्
हाम्रो खानेकुरा र हाम्रो जिवनशैली सँगै केही रसायनहरुले पनि मधुमेह गराउँदछन् । तल उल्लेखित रसायनहरुको संशर्गमा आउँदा, खाँदा, पिउँदा वा श्वासप्रश्वास गर्दा मधुमेहको जोखिम बढ्न सक्दछ । तल दिइएका कुनै पनि रसायनहरुसँग काम गर्दा, खाँदा, सास लिंदा मधुमेहको जोखिमलाई बढाउँछ ।
डाइअक्सिनहरु किरा मार्ने विषादीहरु एवं कागज बनाउँदा र प्लाष्टिकहरु जलाउँदा उत्पन्न हुन्छन् ।
पि.सि. वि. हरु उद्योगमा इन्सुलेसन र चिल्लो पार्ने काम (लुब्रिकेशन) का लागि प्रयोग गरिने एक प्रकारका रसायनहरु हुन् ।
Phthlates प्रायःजसो शरीरको हेरचाहमा प्रयोग हुने क्रिम र तेलहरुमा पाइन्छ ।
Bisphenols' वोतलयुक्त पानी, जुस र सोडामा प्रयोग हुने प्लाष्टिक बोतलहरुमा पाइन्छ ।
गहुँगों धातुहरु (लिड, मर्करी, आर्सेनिक र क्याड्मियम जस्ता) तेल ड्रिलिङ (प्वाल पार्ने) र रिफाइनिङ (शुद्ध बनाउने), माइनिङ (खानी उत्खनन) र अन्य किसिमका उद्योगबाट वातावरणमा छोडिन्छन् ।
यि रसायनहरुबाट जोगिन तिनको प्रयोग सकेसम्म गर्नुहुँदैन । यदि कसैको कार्यस्थलमा यस्ता रसायनहरु छन् भने तिनबाट सुरक्षित रहन अनुहारमा लगाउने मास्क र अन्य सुरक्षा दिने लुगा लगाएर हातहरु वेलावेलामा पखाल्नुपर्छ ताकी खानेकुरा र मुखमा रसायनहरु प्रवेश नगरुन् ।
रसायनहरु हाम्रो वरीपरि सबैतिर छन् । सकेसम्म जिवनाशक विषादीहरु नछरिएका खानेकुराहरु खानुपर्छ । रसायनहरु नभएका वा थोरै मात्र भएका घरायसी सरसफाई सामग्रीहरु (क्लिनर्स) को प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कार्यक्षेत्रहरुबाट हुने पानी, हावा र खानाको रासायनिक प्रदुषण एक कठीन समस्या हो । यसको समाधान गर्न उद्योगमा नियमहरु लागु गराउनमा समुदायले उद्योगपति र सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ ।
हाम्रो खाना, पानी, भूमी र हावाको सुरक्षा बारेमा थप जानकारीका लागि वातावरणीय स्वास्थ्यः सामुदायिक मार्गदर्शन हेर्नुहोस् ।
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=New_Where_There_Is_No_Doctor:के_कारणले_दोस्रो_प्रकारको_मधुमेह_(टाइप_टु_डायविटिज)_हुन्छ&oldid=197" बाट निकालिएको